Cameroon - Ratidza: Ndedi Eyango, Salatiel uye Mambo vachaita muDouala vhiki ino - TELES RELAY
HOME » kambani »Cameroon - Ratidza: Ndedi Eyango, Salatiel naMambo vachaita muDouala vhiki ino
Ichi chikamu che "Mboa Tour" yakarongedzwa nemakwikwi aMutzig Star, sechikamu chegadziriro yeSangano Rokubatanidza rakazivisa Muvhuro unotevera.
Zuva nezuva kunotouraya pane zvinyorwa izvi 17 inogona kuti 2019 inotaura kuti kunwisa kweCameroon kuisa vhiki iyi pamusangano weCICAM muDouala munzvimbo umo vagadziri vakawanda vanozoita.
Kutarisa kubhabhatidzwa kwakaratidzwa "Mboa tour"ipapo pachava nomukuru Ndedi Eyango, Salatiel et zvinhu. Pepanhau inoti izvozvo "Salatiel ... ichataura nyaya ye '' mukadzi we galley yangu '' ... '' Iwe neni '' uye '' Anita '' mwana wake mutsva".
Apo, Mambo, uyo anokunda wekupedzisira shanduro yeMützig nyota ndiye muenzi we manheru; iye achaita pachikamu chakafanana naNdedi Eyango. Iyo yekupedzisira inounza kubata kwayo kwekukura kusvikira manheru.
Kuchinja-shanduka kunoramba kuchireva kuti pakati pevanyori ava vanozoita, pachava nomimbi Shura, uyo achatsvaga vateveri vake. Nguva Malhox the Viber achauya "Gadzirisa nhoroondo nenzira yake kune vanovhiringidzika uye negodo". Musiki we "Foup Fap", South Nyangono ichavawo ipapo.
Asi pamberi pechiratidzo chikuru mangwana, "Kunyange zvakadaro mune guru rezvemari, vadikani vemimhanzi vane imwe nzvimbo. Vachafadzwa nevaKongo Innoss'B, munyori we '' basa rangu ''. Zvichaitika izvi May May 17 ku Canal Olympia Douala ". Nepo kubva ku20h kusvika kuimba yekutsika uye kutamba, «Agathe Djokam, Blanche Ouafo, Yannick Njoya, Audrey Fotso vari kumirira vanhu vanhu usiku humwe ».
Chiratidziro chinorongeka semutambo weMuvhuro wekubatana.
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://actucameroun.com/2019/05/17/cameroun-spectacle-ndedi-eyango-salatiel-et-mambo-vont-se-produire-a-douala-ce-week-end/
Mhemberero yeC20 May, inosungirirana nepamusoro pemabhokisi ekuwana kusvika kuimba yeimba